प्रत्येक वर्ष संग ट्यूमर प्रक्रियाको विकास गति प्राप्त छ। संसारको वैज्ञानिकहरूको सबैभन्दा अवस्था सम्भव कारक अध्ययन र उपचार को आधारभूत विधिहरू अस्पताल को सबै प्रकार मा लगे विरामीहरु र रोकथाम गतिविधिहरु निको गर्न। विकास ट्यूमर प्रक्रिया शरीर को कुनै पनि अंग वा प्रणाली असर गर्न सक्छ। Myelogenous लेकिमिया - यो के हो? रोग को मुख्य कारण, निदान र उपचार को तरिका तल वर्णन गरे।
platelets, रातो रक्त र सेतो रक्त - Hematopoietic सिस्टम नयाँ कक्षहरूको परिपक्वता आधारित छ अस्थि मज्जा। यो प्रक्रिया समानान्तर मा, त्यहाँ पुरानो कक्षहरू कलेजो र फियो को विनाश छ।
जस्तै धेरै र प्लाज्मा रगत तत्व गठन। यस मामला मा, सेतो रक्तकोषहरू लागि खाताहरूको सबै भन्दा ठूलो संख्या - सेता रक्तकोषहरू। तिनीहरूले विदेशी एजेन्ट र यौगिकों को प्रभाव शरीर प्रतिक्रिया लागि जिम्मेवार छन्, र उचित स्तरमा प्रतिरक्षा प्रणाली कायम गर्न अनुमति दिन्छ।
myeloid लेकिमिया भनिन्छ सेतो रक्त को एक ठूलो संख्या को अनियन्त्रित विकास। यो ट्यूमर रोग, को रगत अपरिपक्व पक्षबाट एक महत्वपूर्ण वृद्धि सँगसँगै छ जो। समय, त्यहाँ रोग को प्रगति गराउँछ कि शरीर को सबै अङ्गहरू र प्रणाली मा कक्षहरूको रोग प्रकारका फैलाउने छ।
रोग को causation
यो चरण मा रोग को विकास गर्न प्रमुख unambiguous कारक निर्धारण गरिएको छैन। त्यहाँ रोग अवस्था धेरै संस्करण हो:
असामान्य क्लोन को उपस्थिति - स्टेम सेलको संरचना मा रोग परिवर्तन को विकास को प्रक्रिया छ। कक्षहरू मात्र आफ्नो क्लोन सिर्जना गर्ने, आफूलाई परिवर्तनहरू प्राप्त छैन, जुन बेलामा पनि अन्य संरचना तिनीहरूलाई प्रसारित एक उत्परिवर्तन। यो अवस्था cytotoxic लागूऔषधको एक पाठ्यक्रम संग उपचार सम्भव छैन।
रसायन गर्न एक्सपोजर।
जो मात्र होइन व्यावसायिक आवश्यकता हुन्छ शरीर, मा विकिरण को कार्य। उदाहरणका लागि, अन्य ट्यूमर को उपचार को लागि रेडियोथेरेपी इतिहास प्रयोग गरेर।
अन्य अङ्गहरूको ट्यूमर को उपचार को लागि स्वागत र chemotherapeutic cytostatic लागूपदार्थ myeloid लेकिमिया को विकास को लागि ट्रिगर रूपमा सेवा गर्न सक्छन्।
आनुवंशिक रोग, बंशाणु।
भाइरल उत्पत्ति संग रोग।
साथै, ट्यूमर को उपस्थिति रोगी को सेक्स, उमेर र जीवित क्षेत्रमा विकिरण जोखिम को प्रभाव प्रभावित।
रोग को पुरानो फारम
ट्यूमर रक्त प्रक्रियाको लक्षण को प्रकटीकरण रोग को रूप मा निर्भर गर्दछ। पुरानो myeloid लेकिमिया - सबै भन्दा साधारण फारम। यो राज्य एक घातक चरित्र छ।
पुरानो myelogenous लेकिमिया - यो के हो? यो कारणले गर्दा शरीर त्यहाँ कि रक्त असर एक असामान्य जीन छ भन्ने तथ्यलाई गर्न हुन्छ कि सर्त छ। अस्थि मज्जा - जीन को स्थानीयकरण ठाँउ। को रगत देखि सबै अङ्गहरू मा रोग कक्षहरू फैलाउने छ।
रोग एक तीव्र सुरु र उज्ज्वल नैदानिक तस्वीर छ। यो ढिलो प्रवाह द्वारा विशेषता छ। खतरा रोग को यो फारम कुनै पनि समय, जो रोगी लागि घातक हुन सक्छ मा तीव्र चरण गर्न उन्नति गर्न सक्छ भन्ने हो।
Myeloid लेकिमिया विकास धेरै चरणमा छ:
को पुरानो फारम को पहिलो चरणको
सबैभन्दा विरामीहरु यो चरण मा यो संग निदान छन्। यो asymptomatic वा थोरै लक्षण छ किनभने रोग को शुरू भएको छैन सही निर्धारण गर्न सकिँदैन। पहिलो थकान, पेट वा बायाँ माथिल्लो वृत्त को चतुर्थ मा heaviness, सास को shortness देखिन्छ।
भोजन समयमा, विरामीहरु को epigastrium मा पूर्णतामा को भावना को गुनासो। Palpable एक बढेको प्लीहा लाग्छ। परीक्षा पीडादायी sensations सँगसँगै फिर्ता उल्लेख को प्लीहा देखि। रगत को विश्लेषण मा granulocytes संख्या मा समय वृद्धि, साथै thrombocytosis र वृद्धि, leukocytosis निर्धारण गरिन्छ।
अक्सर विरामीहरु myocardial प्लीहा को विकास मा डाक्टर जानुहोस्। यसको प्रक्षेपण मा तेज दुखाइ देखिन्छ, नशा को लक्षण, शरीर तापमान rises।
यो चरण लगभग कुनै रोग प्रकटीकरण मा। रोगी लागि आवधिक तापमान वृद्धि प्रदर्शन र थकान subfebrile गर्न बाहेक कुनै उजुरी, छ। Myelocytes स्तर सेतो रगत सेल गणना मा वृद्धि जारी छ।
basophils एक तेस्रो वृद्धि स्तर। कि पछि, रोगी न्यानोपन को भावना बाधा र स्क्राच गर्न चाहन्छन् गर्न थाल्छ। यो histamine को वृद्धि उत्पादन कारण हो।
तीव्र चरण (टर्मिनल)
तेस्रो चरण को विकास रोग को तीव्र पाठ्यक्रम समान नैदानिक तस्वीर वर्णन गर्दछ। पुरानो myelogenous लेकिमिया progresses र उज्ज्वल नैदानिक तस्वीर देखिन्छ। विरामीहरु यी लक्षण को गुनासो:
रोगी गरेको वजन मा एक तेज कमी।
रोगी को परीक्षा लसीका नोड्स, कलेजो, फियो, को विकास को विभिन्न समूह को वृद्धि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ एक hemorrhagic सिंड्रोम। विस्फोट संकट - निम्न नैदानिक manifestations द्वारा विशेषता छ जो रोग, अन्तिम चरण:
लसीका वा myeloblasts अस्थि मज्जा वा रगत द्वारा 20% ठूलो हुन्छ;
हड्डी मज्जा बायोप्सी विस्फोट को ठूलो समूह निर्धारण;
myeloid sarcoma को विकास - अपरिपक्व सेतो रक्त को एक घातक ट्यूमर।
रोग को यो चरण मा बिरामीको जीवन palliative हेरविचार को स्तर मा सम्पूर्ण निर्भर गर्दछ।
तीव्र Myeloid Leukemia
को नैदानिक तस्वीर तेजी विकास गरिएको छ, यो रोग को जीवन्त संकेत छ। परिणाम पहिले नै पर्याप्त उपचार को नियुक्ति बिना केही हप्ता वा महिना पछि प्रतिकूल हुन सक्छ।
तीव्र myeloid लेकिमिया - यो के हो? यो प्रक्रिया myeloid रगत रोगाणु को एक घातक ट्यूमर छ। रोगग्रस्त कक्षहरू यो मुख्य कार्य आफ्नो तापनि संक्रमण प्रतिरोध गर्न सक्षम छन्। विस्फोट संरचना को वृद्धि संग समानान्तर बाँकी रक्त घट्छ।
Erythropenia हेमोग्लोबिन कमी फिक्का छाला, सास को shortness, थकान देखिन्छन्। platelets संख्या कम बढ्छ छाला क्षति लागि propensity, रक्तस्राव, petechiae उपस्थिति र hematomas वृद्धि।
पहिलो लक्षण विशिष्ट छैनन्। यो श्वसन भाइरल संक्रमण को manifestations तिनीहरूलाई भ्रममा धेरै सजिलो छ। यसबाहेक, तीव्र myelogenous लेकिमिया प्रगति भएको हड्डी र दुखाइ सँगसँगै छ।
उपचार को सुरु को सफलता निदान को गति र सही निदान मा निर्भर गर्दछ। myeloid लेकिमिया को शङ्काको, परीक्षण निम्न क्षेत्रमा सञ्चालन गर्दै छन् रोग, को रोगी र चरण को सामान्य अवस्था निर्धारण गर्न:
गतिशीलता सबै रक्त को निश्चित स्तर - परिधीय रक्त तैनाथ को विश्लेषण।
रगतको जैव रसायन रोग को विकास को कारण छन् जो कलेजो र फियो, उल्लङ्घनको संकेत गर्छ।
हड्डी मज्जा aspirate बायोप्सी आवश्यक सामाग्री femur को संग्रह पछि प्रदर्शन। विस्फोट प्रकारका उपस्थिति द्वारा निर्धारित।
संकरण उत्परिवर्तन वा असामान्य क्रोमोजोम निर्धारण गर्न।
PCR को असामान्य जीन पहिचान उद्देश्य छ।
Cytogenetic विश्लेषण leukemic कक्षहरू मा असामान्य क्रोमोजोम पहिचान उद्देश्य।
यदि आवश्यक Computed टोमोग्राफी, चुम्बकीय अनुनाद र अल्ट्रासोनोग्राफी प्रदर्शन।
रोग उपचार को सिद्धान्त
Myeloid लेकिमिया उपचार को तत्काल सूत्रपात आवश्यक छ। ऑन्कोलॉजिस्ट रोग, यसको लक्षण को चरण मा आधारित चिकित्सा को योजना, निर्दिष्ट गर्दछ। एक प्रारम्भिक चरण मा भिटामिन आहार, restorative लागूपदार्थ तोकिएको छ।
oncogene मा प्रभाव depressing सक्षम लागूऔषधको प्रयोगमा आधारित myeloid लेकिमिया उपचार। निश्चित सम्पत्ति:
"Imatinib" - हालतमा myeloid लेकिमिया oncogene उत्पादन जो प्रोटिन, को गतिविधि लाइ रोक्छ;
"Dasatinib" - विफलता वा असहिष्णु रोगी "imatinib" को मामला मा प्रयोग दबाइ;
"Nilotinib" - अर्थ नै प्रभाव, दोस्रो पुस्ता oncogenic inhibitors सम्बन्धित;
"Ponatinib" - को विस्फोट विरुद्ध प्रभावकारिता बलियो नयाँ उत्पादन, को एक, तर रोगी को भाग मा गम्भीर जटिलताहरू पैदा गर्न सक्छ।
स्वागत प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउन तोकिएको विरामीहरु रूपमा "इंटरफेरन"। दबाइ रोग सामना गर्न सक्षम छ, तर यो एक दैनिक उपचर्म इंजेक्शन को उपचार मा प्रयोग गरिन्छ।
केमोथेरापी बाहिर छ cytostatic एजेन्ट प्रयोग गरेर। हड्डी मज्जा कक्षहरूको transplantation मा थप उपचारको रूपमा प्रयोग चिकित्सा को यो भाग। प्रभावकारी मानिन्छ "Hydroxycarbamide", "busulfan", "Vinblastine", "Vincristine", "Cytarabine।"
ओन्कोलजी मा Irradiation बाहिर छ उच्च ऊर्जा रेज, साथै कणहरु प्रयोग गरेर। यो आवश्यकता आधारमा व्यक्तिगत रूपमा लागू गरियो। जब myeloid लेकिमिया विकिरण चिकित्सा हड्डी र दुखाइ कम गर्न प्रयोग गरिन्छ। पनि ओन्कोलजी hematopoietic प्रणालीमा irradiation हड्डी मज्जा transplantation पहिला प्रयोग गरिएको छ।
हड्डी मज्जा कक्षहरूको Transplantation
सर्जरी उपचार को एक एकदम साधारण विधि, तर महंगा छ। हरेक रोगी यसलाई उठयो गर्न सक्षम छ। Kashirka ओन्कोलोजी केन्द्र - एक ट्यूमर चिकित्सा को सबै भन्दा प्रसिद्ध संस्थाहरू मध्ये एक - आफ्नो विरामीहरु निको पार्न मदत यस्तो सर्जरी धारण।
हड्डी मज्जा को Transplantation अब रूपमा कम प्राय प्रयोग गरिन्छ स्टेम सेल को transplantation को परिधीय रक्त लिइएका हुन् कि। त्यहाँ प्रक्रिया दुई भिन्न छन्:
हड्डी मज्जा दाता मा hematopoietic कक्षहरू प्रयोग गरेर। उपयुक्त दाता, एक रोगी को एक सापेक्षिक हुन कुन पाउन किनभने राम्रो हार्ड यो, परिवार कसैलाई हुन सक्छ।
परिधीय कक्षहरूको Transplantation। यो प्रक्रिया स्वस्थ कक्षहरू साथ हटाउन सकिँदैन भन्ने तथ्यलाई र विस्फोट द्वारा जटिल छ।
Oncocenter Kashirka मात्र होइन रोगी मृत्यु कम गर्न मदत जो शल्य चिकित्सा प्रक्रियाहरु, बाहिर वहन, तर थर्मल पृथक्करण, kriotermoablatsii र radiowave सर्जरी को आधुनिक तरिका प्रयोग गरेर।
यस लेखमा शब्द "myelogenous लेकिमिया" छलफल भएको थियो। यो के, तपाईं अब थाहा छ। एक अनुकूल नतिजा सम्भव छ जब रोग को प्रारम्भिक चरणमा को उपचार को पूर्ण पाठ्यक्रम। टर्मिनल चरण केवल palliative चिकित्सा समावेश छ। लेट चरण र घातक रोग विरामीहरु को मृत्यु अग्रणी।
प्याज बोक्रा: उपयोगी गुणहरू
Frankish राज्य को Carolingian राजवंश शासनकालको सुरुमा
ZAO "SU-155": समीक्षा। SU-155: ग्राहक समीक्षा र कर्मचारीहरु
किन निद्रामा मान्छे समयमा आफ्नो दाँत पीसने